'बागी ३' को आक्रामक व्यापार जारी, ६ दिनमा कति कमायो ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘बागी ३’ को आक्रामक व्यापार जारी, ६ दिनमा कति कमायो ?
एजेन्सी: टाइगर श्राफ र श्रद्धा कपुर स्टारर चलचित्र ‘बागी ३’ ले आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ । चलचित्रको धमाकेदार प्रदर्शन सिनेमाघरमा अझै पनि जारी छ । यदि अझै केहि दिन चलचित्रले यसरि नै प्रदर्शन गरेमा बागी ३ यो बर्षको हिट फिल्म बन्नेमा दुईमत नहोला।
बक्स अफिस इन्डियाका अनुसार एक्सन र स्टन्टको भरपुर प्याकेज रहेको चलचित्रले प्रदर्शनको छैठौं दिन ७.५० करोडको व्यापार गरेको छ। यस हिसाबले चलचित्रले छैठौं दिनसम्म आइपुग्दा कुल ८२ करोडको आंकडा पार गरिसकेको छ । यहि हिसाबले चलचित्र छिट्टै नै १०० करोडको क्लबमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ।
बागी ३ ले रिलिजको पहिलो दिन १७ करोडको व्यापार गरेको थियो, जुन यस बर्ष रिलिज भएको चलचित्रहरुमा एक रेकर्ड हो। दोस्रो नम्बरमा तान्हाजी: द अनसंग वारियर जसले रिलिजको दिन १५ करोडको व्यापार गरेको थियो। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा लव आजकल रहेको छ यसले पनि रिलिजको पहिलो दिन साढे १२ करोडको व्यापार गरेको थियो।